Date My Pet » 5 Soso-kevitra ho tafavoaka velona Long Distance fifandraisana – Mpianatra Edition
5 Soso-kevitra ho tafavoaka velona Long Distance fifandraisana – Mpianatra Edition
Last nohavaozina: Nov. 25 2020 | 3 min namaky
Summer fotoana dia anisan'ny mahafinaritra ny fisian'ny mpianatra. Azo antoka fa izany. Ianao tsy tokony hanadino ny tena zava-misy momba ny am-pianarana, miala sasatra kely, hahazo ny Tan amin'ny, misotro zava-pisotro avy fruity voaniho, ary miverina mifandray amin'ny fianakavianao sy ny tanàna nahaterahany namana. Izany dia toa tsara tarehy tokoa lehibe.
Afa-tsy iray tsipiriany kely ... tsy feno ianao. Ianao toy ny cone tsy ny gilasy. Toy ny pizza tsy misy fromazy, toy ny Miley Cyrus tsy misy handringana baolina, Bonnie irery tsy misy ny Clyde.
Tsy niresaka aho mikasika ny hisaraka avy ao pirahalahiana kambana; Aho mafy manondro ny fotoana amin'ny fifandraisana fantatra amin'ny hoe "lavitra fisarahana". Rehefa avy nandany valo volana tena tsara any am-pianarana amin'ny tia, ianareo samy manana ny hiverina any an-tranonao steads sy mianatra ny tady ho ankoatra raha hatrany fa kilalaon'afo manokana.
Mety ho mora sy ho miaraka amin'ny tovovavy mahafatifaty varavarana manaraka izay nitranga ny mandeha any amin'ny sekoly iray ihany, na dia mety ho hisaraka amin'ny kilometatra, ranomasimbe, mety na dia kaontinanta. Dia mahazo mafy indraindray, ary tsy mora izany bita mba hihazonana ny fifandraisana izay norafetiko nandritra ny ny taom-pianarana.
Tsara zavatra tsara eto aho ho anareo.
Voalohany indrindra, fanoloran-tena no fototra.
Tsy mahagaga izany fa ireo izay nanolo-tena ho ny fifandraisany dia ataovy farany. Fanahy. Milay izany halavirana mandeha ny fifandraisana akaiky koa. Tsy afaka nifankahita isan'andro tsy tapaka sy mitaky fahatsapana mainka hafanam-po sy maharitra tsy mivadika amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Hanararaotra ny lehibe rehetra ny teknolojia, fitaovana sy ny gizmos.
Miaina ao anatin'ny tontolo nomerika ordinatera, finday sy ny teknolojia ubiquitous. Tamin 'ny andro lafo harena fotsiny ny hiantsoanay olona an-telefaonina ... amin'izao fotoana izao dia afaka Skype amin'ny olona eo amin'izao tontolo izao noho ny tena maimaim-poana. Manana mora, izany ve tena tokony hisy fialan-tsiny. Ny teknolojia dia fitaovana lehibe hampiasa, na dia ny SMS mandrakariva resaka, miresaka an-telefaonina, iray amin'ireo haino aman-jery sosialy maro baovao na Skype. Ampiasao izany ary mampiasa azy io matetika.
Hampanalavitra ao eo aminao sy ny manan-danja hafa fahafahana mamorona ho anao ny mampiseho ny sasany mamorona sy nahay namoron-kevitra. Ampiasao tena taratasy sy tena penina sy taratasy fomba lany andro taloha, gaga ny tia voninkazo nanolotra an-tranony (manondro isa 2 sy ny filaminana an-tserasera avy amin'ny fivarotana voninkazo) na manao fitsidihana tampoka ny mahazatra raha azo atao. Ataovy ny misaina ny satrony ary mampiseho ny sasany amin'ny tena originality.
Manaiky ny fotoana hahazoana ataonao mba hiara-mandany.
Satria ho ankoatra nandritra ny fotoana ela, raha mitantana mba ao amin'ny fitsidihana sy ny handeha amin'ny Adventures sasany dia ho azo antoka fa faran'izay manokana. Tsy hoe aho izany dia ho tahaka izany toe-javatra eo amin'ny tantaram-pitiavana ny orana tsy ho amin'ny Notebook, fa ho tsara tarehy akaiky.
Tsarovy fa tsy ny fahataperan'izao tontolo izao.
Ya dia mety mahazo mafy indraindray, ary ianao te-hamolaka ao amin'ny foetus toerana sy ny whimper (Tonga any aho- tsy mahamenatra) fa tsarovy izany halavirana izany mangingina salama. Ny maha afa-tsy ny mpiara-miasa dia hanampy anao lanja kokoa ny fotoana iarahana, ary ianao dia tsy maintsy zatra azy io ela na ho haingana. Dia tsara kokoa raha manao izao manomboka tsara?
Aoka ireo toro-hevitra dimy hanao ny asan'ny Guru ny fitiavanao ny vanin-taona mafana, ary ianao ho tsara fotsiny. Angamba ianareo hoe handeha ho iray tapitrisa in-"aiza ny tapany hafa?"Ary" no mbola miaraka what's-ny-anarany?"Fa ankehitriny dia afaka mamaly amim-pahatokiana" Izaho ao amin'ny fifandraisana tsy tapaka aminy / taminy, ary amin'izao fotoana izao ry zareo tao an-tranony ", ary" eny, Manantena anao aho ".
Best Voalohany Date Tips for Men
Mitadiava ianao Online Dating Down?